100W Led High Bay Replacement Bulbs 5000K China Manufacturer
Nkọwa:480V Led High Bay Lighting,Ndị na-ahụ maka nnukwu mmiri na-akwagharị,Ejiri ire ọkụ dị elu maka ire ere
Home > Ngwaahịa > Elu Bay ìhè > 100 Watt Led High Bay Light > 100W Led High Bay Replacement Bulbs 5000K
Ihe Nlereanya.: BB-GKD-100W-E-DR1
Ike anyị dị 480V Led High Light dị ntakịrị karịa ọkụ ọkụ dị elu. Nke a mere ka High Bay Nnọchi Bulbs nwere e fficient jụrụ Ọdịdị, ogologo ndụ na àgwà nke elu-ike ngwaahịa na-ekwe nkwa. Anyị 100w Led High Bay Light For Sale is s indety and quality guaranteed, ETL DLC depụtara, 3 afọ warranty. Nke a mere ka ụlọ nkwakọba ihe ọkụkụ nwere ike ịchọta 0-10V dimmer ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ị nwere ike ị na- egbu 300W HPS (nnukwu nrụgide sodium) ma ọ bụ MH (Metal Halide) bulb site na 100W edu ụlọ nkwakọba ọkụ ọkụ . Nke a mere ka ụlọ nchekwa dị elu na- echekwa ihe karịrị pasent 50 na ọkụ eletrik nke ọkụ.
Ngwaahịa : Elu Bay ìhè > 100 Watt Led High Bay Light
100W Led High Bay Replacement Bulbs 5000K Kpọtụrụ ugbu a
ufo duru ìhè mmiri dị elu 100W Kpọtụrụ ugbu a
Ngwongwo nke Aluminom Die-cast 100W UFO dị elu Kpọtụrụ ugbu a
ada ufo elu n'ọnụ mmiri 5000 kelvin Kpọtụrụ ugbu a
480V Led High Bay Lighting Ndị na-ahụ maka nnukwu mmiri na-akwagharị Ejiri ire ọkụ dị elu maka ire ere 480V Led High Bay Light Fixture Led High Bay Light 150w High Bay Lighting 150W UFO High Bay Lighting 150W UFO Led High Bay Light